Wenzani uma uthola ukuthi i-iPhone ngeke sikukhokhise? Mhlawumbe ucabanga ibhethri siphukile, futhi kudingeka entsha nawe. Kodwa eqinisweni, kukhona ezinye izinto ezazingashiwo kwaphazamiseka ikhono ukushaja iPhone yakho ibhethri. Ungazama lezizinto ngaphambi ukuthi ushintshe ibhethri ngelinye.
1. Hlola-USB Port
Uma iPhone yakho ayikwazi ukuthola icala uma usebenzisa imbobo ye-USB. Into yokuqala kufanele sizame ukuba uxhume iPhone yakho kwenye echwebeni USB noma kwenye ikhompyutha. Uma-ke i-computer ibona futhi lisola ifoni yakho, ukuthi ngabe kusho sinqamukile owedlule USB port.
2. Hlola USB encane
Udinga ukuhlola kwesitoreji sakho se ikhebula. Ikhebula le-USB isetshenziswa ukuxhuma iPhone yakho nekhompyutha noma udonga ishaja. Uma Saphulwa, ke Yebo awukwazi ashona. Lapha ungasebenzisa Ukumiselela Indlela ukuhlola (ukushintsha enye ikhebula le-USB). Uma uthola ukuthi inkinga ikhebula le-USB, vele uye ukuthenga entsha.
3. Hlola Ishaja
Nakuba ishaja odongeni thukela kungahambi kahle, kudingeka sisithathe ngokungathi kwaloku libhekelele. Ungakwazi namanje ukusebenzisa Indlela ezothatha isikhundla ukuhlolwa. Boleka ishaja omunye bantu noma nje ukushaja iPhone yakho nge computer yakho. Ngakho singathembela hlola ukuthi sinqamukile odongeni ishaja.
4. Hlola Amandla
Ucingo ukushaja kudinga zihlala zinamandla athile. Mhlawumbe zisetshenziselwa ukusebenzisa ezinye idivayisi like ikhibhodi ukushaja ifoni yakho, kodwa ngezinye izikhathi abakwazi ukunikeza voltage ngokwanele. Khona-ke ifoni yakho ayikwazanga ukuthola icala. Ngakho sicela uqinisekise ukuthi kungukuthi wokufaka iPhone yakho kwekhibhodi ye-kodwa kukhompyutha yakho.
5. Qala kabusha iPhone
Qala kabusha kuyindlela ezivamile ukuxazulula izinkinga ezincane. Ungase umangale ngezinye nokusebenza ngendlela. Khonamanjalo, ke abakwazi ukuxazulula zonke izinkinga. Kodwa uma ukuthola ifoni yakho Ngeke ngikwazi ukushaja, kungani hhayi phansi futhi kabusha ipulaki emandleni. Lokho kungase ukukunika ukumangala.
6. Sebenzisa indlela iPhone yokutakula
Ngezinye izikhathi ukuxazulula izinkinga eziyinkimbinkimbi iPhone yakho idinga izinyathelo ethe xaxa. Qala kabusha ayikwazi ngesandla lokhu. Khona-ke ungenza ifoni kumodi yokutakula ukubuyisela yakha ibhekhaphu noma kumasethingi factory (kuzosusa yonke idatha yakho). Lokhu kungaba indlela enhle.
7. ibhethri yakho isifile
Uma nangeyodwa kulezi zinto ezingenhla umsebenzi, Ngeshwa, ibhethri wena ufile futhi idinga ukushintshwa. Apple unikeza isevisi kwebhethri $79, plus $6.95 wemikhumbi. Uma iPhone yakho imbozwe Apple One Year Limited Warranty, AppleCare +, noma Hlela AppleCare Ukuvikelwa, ungakwazi ukushintsha mahhala.
Posted on Januwari 16, 2015 Januwari 16, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi iPhone, iPhone ngeke sikukhokhise
Langaphambilini post Previous: Windows Ayikwazi Bona Ifoni yami Android
Next post Next: Izinto Esingabonisa Ngazo Ukuthi Battery Iphesenti ku-iPhone & iPad